Kungani Umsindo Ungaphandle Kwekhaya (AOOH) Ungasiza Ukuholela Inguquko Kude Kumakhukhiki Ezinkampani Eziseceleni | Martech Zone
Sesinesikhathi eside sazi ukuthi imbiza yekhukhi yenkampani yangaphandle ngeke ihlale igcwele isikhathi eside. Lawo makhodi amancane ahlala kuziphequluli zethu anamandla okuthwala ithoni yolwazi lomuntu siqu. Ivumela abakhangisi ukuthi balandelele ukuziphatha kwabantu ku-inthanethi futhi bathole ukuqonda okungcono kwamakhasimende amanje nangase abe khona avakashela amawebhusayithi omkhiqizo. Baphinde basize abakhangisi - kanye nomsebenzisi ojwayelekile we-inthanethi - ukuphatha imidiya ngempumelelo nangempumelelo.
Pho, yini inkinga? Umbono obangele amakhukhi enkampani yangaphandle wawunengqondo, kodwa ngenxa yokukhathazeka kobumfihlo bedatha, sekuyisikhathi soshintsho oluvikela ulwazi lomthengi. E-US, amakhukhi asahleli ephuma esikhundleni sokungena. Ngenxa yokuthi amakhukhi aqoqa idatha yokuphequlula, abanikazi bewebhusayithi bangaphinda bathengise leyo datha komunye umuntu wesithathu, njengomkhangisi. Abantu besithathu abangathembekile abathenge (noma abantshontshe) amakhukhi edatha bangasebenzisa lolo lwazi ngendlela engafanele ukwenza obunye ubugebengu be-inthanethi.
Abakhangisi sebeqalile ukucabanga ngokuthi izinketho zokukhangisa kwedijithali zizoshintsha kanjani uma imbiza yekhukhi isiphelile. Abathengisi bazolandelela kanjani indlela yokuziphatha ngempumelelo? Bazonikeza kanjani ngempumelelo ukukhangisa okufanele izethameli zabo eziqondiswe kubo? Nge Umsindo Ungaphandle Kwekhaya (AOOH), abathengisi basebenzisa isichasiselo ukuze bahlole inani noma i-ROI yamashaneli axhuma amabhrendi kumakhasimende angaba khona.
Ngenhlanhla, kunezinhlobonhlobo zamaqhinga okuthengisa amafaneli aphansi asetshenziswa namuhla azothola ukuhlobana emhlabeni we-post-cookie. Imboni yokumaketha isahlola ukuthi ikusasa elingenakhukhi elithembele ezikhangisweni ezihlosiwe lizobukeka kanjani. Sisazoba namakhukhi enkampani yokuqala ekhiqizwe isizinda somsingathi ukuze siqoqe izibalo zabanikazi bewebhusayithi. Amabhrendi angasebenzisa ukukhangisa okusekelwe kumongo, agxile ekwenzeni kube ngokwakho, kanye nezithameli eziqondiwe ngokusekelwe endaweni nesikhathi.
Amakhukhi enkampani yokuqala akusona sodwa isixazululo sokuqoqa nokwakha ulwazi lwekhasimende ukuze kuthuthukiswe imikhankaso yokukhangisa eqondisiwe. Abakhangisi nemikhiqizo basebenzisa elinye isu elisebenzayo: Umsindo Ungaphandle Kwekhaya.
Ukwenza kube ngokwakho ngaphandle kokuhlasela kobumfihlo
Umqondo omusha wokufaka izikhangiso ezilalelwayo eziqondisiwe ezitolo, i-AOOH ihlanganisa umongo wendawo yokuthenga nezinto ezizwakalayo zokumaketha. Ngokuhlanganisa lezi zikhangiso endaweni yemakethe ye-AOOH ehleliwe, abakhangisi bangakwazi ukuzwakala ukwenza kusebenze kwefaneli engezansi njenge buy, Ukudayiswa, Isigqebhezana ukufinyelela amakhasimende ekupheleni kohambo lokuthenga.
Imikhiqizo isebenzisa i-AOOH ukuze uthole ulwazi lwekhasimende olusebenza kahle kakhulu esitolo, isakaza izikhangiso zohlelo ngokuqondile kubathengi ababandakanyekile, okuthonya izinqumo zokuthenga ngesikhathi sokuthenga.
Ihlanganisa i-AOOH njenge indawo kanye nokukhushulwa ngaphakathi kwenhlanganisela yokumaketha kunikeza ithuba elihle lokudambisa inguquko kude namakhukhi ezinkampani zangaphandle, ikakhulukazi njengoba ukwenza kube ngokwakho kanye nedatha kuhlala kungukhiye empumelelweni yomkhankaso wokukhangisa ngonyaka ozayo. Amabhrendi neminyango yawo adinga ukucabanga ngaphandle kwebhokisi futhi asebenzise indlela eqondiswe kakhudlwana edizayinelwe ukunikeza ukuzizwisa okuyingqayizivele, komuntu siqu kubathengi.
Ubuchwepheshe be-AOOH abudingi idatha yomuntu siqu ukuze isebenze kahle. Isekela ukukhangisa kwengqikithi nezixazululo zezinhlelo - futhi esikhundleni sokumba idatha yomthengi ngamunye, igxila ekuhlangenwe nakho kwamakhasimende esitolo.
I-AOOH medium ifinyelela wonke umuntu othenga endaweni enezitini nodaka. Idizayinelwe ukusetshenziswa nje, bekungakaze kuhloswe ukuthi kube isiteshi semidiya esisodwa kwesinye. Akudingeki ukhathazeke nge- i-creepiness factor ethula namakhukhi enkampani yangaphandle ngoba i-AOOH isekelwe endaweni, hhayi maqondana nedivayisi. Izibalo zabantu nokuziphatha komthengi akusuki kudatha yomuntu siqu. Ivumela abakhangisi ukuthi bakhethe futhi balethe ukuzizwisa komuntu siqu esitolo kuyilapho bethobelana nomthetho wobumfihlo.
Ngokombono wohlelo, i-AOOH ihlala ivuliwe futhi ilungile. Ngenkathi isathembele ku-Demand-Side Platforms (I-DSPs) ukuze iqondise izethameli, i-AOOH isusa umhlaba ongenakhukhi maduze ngokukhomba indawo kanye nokuqondisa komkhiqizo kushelufu. Isikhathi esihle sokuthi i-AOOH ikhulise ubukhona bayo esikhaleni sohlelo nokuthi abathengi basebenzise indawo esikuyo.
I-AOOH Inikeza Abakhangisi Inzuzo
Emhlabeni wamakhukhi wenkampani yangaphandle, amabhrendi asebenzisa i-AOOH azothola inzuzo. Ngenkathi idatha yomuntu wesithathu enza ikhiqiza isamba esikhulu solwazi mayelana nokuziphatha kwabathengi, ikwenza lokho ngokulandelela wonke umlando wokuphequlula wabasebenzisi be-inthanethi. Njengedatha yenkampani yokuqala, eqoqa ulwazi lokwakha ubudlelwano kuphela, i-AOOH inikeza ithuba elihle lokukhulisa ukwethembeka komkhiqizo nokwethenjwa kwabathengi.
Amakhukhi ezinkampani zangaphandle athuthukiswa njengethuluzi lokusiza amabhrendi aqonde amakhasimende awo, aqoqe imininingwane kudatha eqoqwe ukuze anikeze ulwazi lomuntu siqu, oluqondiswe ku-inthanethi lwesikhangiso. Ukuntuleka kokugada okungaguquki kanye nokwenyuka okukhulu kwedatha eqoqiwe yengezwe ekukhathazekeni komthengi ngokuthi lungakanani ulwazi lomuntu siqu olungaqoqwa amabhrendi ngaphandle kwemvume yabo ecacile.
I-AOOH isenziwe ibe ngeyakho kodwa ayikhahli i-brand trust. Ngenxa yokuthi iyisixazululo somsindo osekelwe endaweni, i-AOOH inikeza ithuba eliyingqayizivele lokugcwalisa imilayezo yomuntu siqu njengezikhangiso zeselula noma ukufaka uphawu emhlabeni jikelele. Ihlangana kalula endaweni yamakhasimende - futhi ibekwe kahle ukuze idlale indima ehamba phambili eyimpumelelo emikhankasweni yokukhangisa yangonyaka ozayo.
Njengoba singena ku-2022, ukukhangisa okuhleliwe kuyaqhubeka nokufunda futhi kuguquke. Ubhubhane lwenze isabelomali sezinhlelo, futhi isidingo esandayo sokuvumelana nezimo sizoqhubeka sibhebhezela lokho kusheshisa. Empeleni…
Isabelomali esimaphakathi sika-2022 sezigidigidi ezingama- $ 100 sizoholela ekwenyukeni okumangazayo kwabathengi abathenga izinto ezibalulekile esitolo.
Amathrendi okukhangisa ngohlelo, izibalo, nezindaba
I-COVID-19 isize ekukhuthazeni ukukhula komsindo, kokubili ngomculo osakazwayo namaphodikasti. Ngo-2022, siheha abathengi ngemilayezo yobuciko kanye nengqikithi endaweni yokuthenga nge-AOOH. Isikhathi sokushumayela ukubaluleka kwe-AOOH futhi sifundise abakhangisi nabakhangisi ngomthelela wayo oqondile ekuthengisweni komkhiqizo.
Funda mayelana ne-Vibenomics Xhumana ne-Vibenomics
Tags: aooh ukukhangisaisenzoalalelwayoumsindo ungaphandle kwekhayaukukhangisa okulalelwayo ngaphandle kwekhayaukukhangisa okusekelwe kumongoukuphekadspumsindo osuselwe endaweniooh ukukhangisangaphandle kwekhayaukuzenzelai-post-cookieamakhukhi wenkampani yangaphandlesibenomama